पीसी को लागी InShot भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्- विन्डोज 7, 8, 10 & म्याक नि: शुल्क
पीसीको लागि InShot भिडियो सम्पादक (विन्डोज र म्याक) -नि: शुल्क डाउनलोड
Inhot भिडियो सम्पादक सर्वश्रेष्ठ फोटो र भिडियो सम्पादन अनुप्रयोग हो जुन तपाईंले पहिले कहिल्यै देख्नु भएन. हजारौं भिडियो सम्पादन अनुप्रयोगहरू गुगल प्ले स्टोरमा उपलब्ध छन् तर InShot भिडियो सम्पादक छोटो अवधिमा विशाल डाउनलोडहरू गर्नुभयो.
यो विशेष गरी तपाइँको मा भिडियो अपलोड गर्न को लागी डिजाइन गरीएको छ इन्स्टाग्राम पृष्ठहरू. यो धेरै प्रयोगकर्ता-अनुकूल छ र तपाईं सजीलै आफ्नो फोटो र भिडियो सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ.
यस लेखमा, म तपाईंलाई चरण by चरण गाईडको बारेमा प्रदान गर्दैछु “विन्डोज र म्याकका लागि नि: शुल्क InShot अनुप्रयोग डाउनलोड गर्ने?”
कृपया लेख को बारे मा जाँच गर्नुहोस् “विन्डोज र म्याकको लागि InShot अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना कसरी गर्ने?”
1 डाउनलोड र स्थापना- पीसीको लागि InShot भिडियो सम्पादक
1.1 पीसी को लागी InShot को फाइदा:
डाउनलोड र स्थापना- पीसीको लागि InShot भिडियो सम्पादक
लागि नि: शुल्क डाउनलोड र इनशट अनुप्रयोगको स्थापना, तपाईंले यी चरणहरू मात्र पालना गर्न आवश्यक छ.
को InShot भिडियो अनुप्रयोग क्यामेरा र यसको भिडियो फुटेज नियन्त्रण गर्न केहि संगै सफ्टवेयरको साथ अपरेट गर्न सकिन्छ. यस उद्देश्यका लागि, तपाइँलाई मात्र आधिकारी चाहिन्छ InShot अनुप्रयोग पीसी को लागी.
को स्थापना प्रक्रिया सुरू गर्नु अघि InShot अनुप्रयोग विन्डोजहरूको लागि अनुप्रयोग, दिमागमा राख्नुहोस् कि तपाईंले एउटा स्थापना गर्नुपर्नेछ एन्ड्रोइड इमुलेटर, जस्तै bluestacks, Nox अनुप्रयोग प्लेयर, वा Xeplayer.
तपाईं यी साधारण चरणहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ पीसी को लागी InShot अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईंको कम्प्युटरमा अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्. कृपया चरणहरूको पालना गर्नुहोस् र Wyze अनुप्रयोग स्थापना गर्नुहोस्.
सुरुमा, एन्ड्रोइड इमुलेटर डाउनलोड गर्नुहोस् र स्थापना गर्नुहोस् Bluestacks तपाईंको पीसीमा तिनीहरूको वेबसाइटमा https://www.bluestacks.com/.
इमुलेटर डाउनलोड पछि, you have to run the emulator app on windows. यसलाई चलाउनको लागि तपाईंको एन्ड्रोइड इमुलेटरको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्.
अब, मा Wyze अनुप्रयोग को लागी खोजी गर्नुहोस् प्ले स्टोर. चयन गर्नुहोस् InShot भिडियो सम्पादक अनुप्रयोग र क्लिक गर्नुहोस् स्थापना गर्नुहोस्.
को अवलोकन InShot भिडियो सम्पादक
InShot भिडियो सम्पादक एक हो इन्स्टाग्राम पृष्ठमा तपाइँको भाइरल भिडियोहरू अपलोड गर्न मद्दत गर्ने अद्भुत भिडियो सम्पादन अनुप्रयोग.
कहिलेकाँही तपाइँ औसत भिडियो मन पराउनुहुन्न र कम गुणवत्ता को कारण सम्पादन भिडियो अपलोड गर्न मन पराउनुहुन्छ. तपाईंको भिडियोहरू भाइरल हुन्छ जब तपाईंको सामग्री अजीब छ.
को InShot भिडियो सम्पादक सम्पादनको सबै सभ्य प्रकार्यहरू शामिल गर्दछ. यदि तपाईं MEMS बनाउँदै हुनुहुन्छ र भिडियोहरूमा पाठ प्रयोग गरेर यसलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ InShot भिडियो सम्पादक.
पीसी को लागी InShot को फाइदा:
यहाँ तपाईं को लाभ देख्न सक्नुहुन्छ InShot भिडियो सम्पादक जुन उपलब्ध छ नि: शुल्क गुगल प्ले स्टोरमा.
तपाइँ तपाइँको मा आफ्नो भिडियो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम पृष्ठ उच्च गुणवत्ता संग.
तिमी सक्छौ काट्नुहोस् र पाठ थप गर्नुहोस् तपाइँका भिडियोहरूमा.
तपाईं भिडियो र गति नियन्त्रण को चमक समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो भिडियो सामाजिक मिडिया मा साझा गर्न सक्नुहुन्छ.
पनि, तपाइँ विभिन्न प्रकारका अनुपात अनुपातको साथ तपाइँका भिडियोहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ.
फिल्टर विकल्प प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो भिडियोहरूमा फिल्म शैली थप्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं बनाउन सक्छ ढिलो गति भिडियोहरू र भिडियो रूपान्तरण गर्नुहोस् MP4 ढाँचा.
सजीलै तपाइँको सेटिंग्स र वीडियो नियंत्रण विकल्पहरु लाई अनुकूलन गर्नुहोस्.
यी एक को सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरू हुन् पीसीको लागि InShot भिडियो सम्पादक. तपाईं डाउनलोड र स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ पीसीको लागि InShot अनुप्रयोग र यसको सुविधाहरूको आनन्द लिनुहोस्.
यो लेख पढ्न को लागी धन्यवाद, म आशा गर्छु कि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो र तपाईंलाई पक्कै मद्दत गर्नेछ विन्डोज र म्याकको लागि InShot अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्.
पीसी विन्डोजको लागि एडावर एडी ब्लक 10/8/8.1/7 - नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
Asus ai suite For Pc Windows 10/8/8.1/7 - नयाँ संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस्
अन्तर्गत फाइल: डाउनलोड फेसटाइम सँग ट्याग गरिएको: पीसी को लागी InShot अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्, नि: शुल्क डाउनलोड इनशट सम्पादक अनुप्रयोग, Inhot अनुप्रयोग डाउनलोड र स्थापना गर्नुहोस्, InShot अनुप्रयोग पीसी को लागी डाउनलोड गर्नुहोस्, विन्डोज को लागी InShot 7/8/10 & म्याक, Inhot भिडियो सम्पादक अनुप्रयोग अनलाइन